Htet T San Photography, New York, NY (2021)
www.htettsan.com https://serenity-space.tumblr.com Art is to not seek attention but to speak the truth of the Soul. I Love Art as an Artist.
Moved by the Emotion, Drunk by the Beauty, Guided by the Knowledge, While Analyzing Intellect, In my own Search of Wisdom.
မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံး အားတင်းထားကြပါ။ ကိုယ်တွေ နိုင်မှာပါ။ အားလုံးလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ CDM ကကိုယ်တိုင် အလေးစားဆုံးလူတွေထဲမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘဲ ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ အကြော်တွေ ရောင်းပြီးလိုက်ကျွေး ခါတိုင်းရောင်းနေကျ ဈေးဘန်းတွေချ CDM သမားတွေ မုန့်လိုက်ဝေ 99% ကလူတွေပေါ့ ရဲဖမ်းလို့ပြေးရင် အိမ်တွေမှာ ကူဖွက်ပေး ဒီလို စေတနာအပြည့်နဲ့ ဝိုင်းကူညီ စောက်ရှောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့။ ကိုယ်တွေ လည်း တတ်နိုင်သလောက် လိုက်ပြီး ကြိုးစားပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အတင်းကြီး သူတို့ အာဘော်ရဖို့အရေး ဖွတ်ဉာဏ် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လိုက် နှိမ်ပြော လိုက် နှောက်ယှက် ရှိတဲ့စေတနာတောင် စေတနာမပျက်ပျက်အောင် လိုက်လုပ်နေကြတဲ့ လောက်တက်နေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ချီး ဦးနှောက်သာသာ စောက်ပို အဖျက်သမားစိတ်ဓာတ် တွေကိုတော့ ဘာမှထည့်မပြောတော့ဘူးလေနော။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် အကျိုးပေးမယ်လို့သာ လွှတ်ထားလိုက်။ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်။ CDM နိုင်ရမယ်။ ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်သင့်ခံရလောက်အောင် အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးဘူး။ အညံ့မခံဘူး ဆိုတာ ကမ္ဘာက သိအောင် ပြရမယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ အောင်မြင်မယ်လို့သာ တွေးပါ။
Min Aung Hlaing MUST FAIL along with manipulative deceptive military regime agendas, Disgusting abusive military like patriarchy attitudes and Good for Absolutely Nothing Myanmar Education system trained by Military Regime. Burmese people from all around the world are Fighting Against it. There is NO PLACE for The Coup in the modern world and civilized society. #SupportCDM
We strongly rejectaproposal from Indonesia, which is trying to get resolution from all ASEAN members. ASEAN is proposing to hold another election as pledged by military junta. This resolution is completely UNACCEPTABLE. Myanmar People Don't Want Military Dictatorship. We have to call on all ASEAN members to respect Myanmar people's VOTES on November. Myanmar Does not need another election. Myanmar already have an elected government. What Myanmar people want is to Free Daw Aung San Su Kyi and Proceed the Democratic Process.
Release the prisoners. End the violence. Respect human rights, and the will of the people expressed in recent elections,” he said, insisting that “coups have no place in our modern world". _United Nations chief Antonio Guterres
- Myanmar needs Democracy. People are risking their lives protesting the dictatorship against the gun threats because Military Dictatorship is entirely UNWANTED and sick and tired of living with their rules. We need more Help from United Nations than just statements. Myanmar military is ruled by Psychopaths who don't care about statements. We need more help and cooperation from every nation and every government to Fight against Myanmar Military Dictatorship and Stop the Regime from insulting and Abusing Human Rights and Human Dignity.
Spring soon. In the mood for Primavera or ...post COVID 19 post revolution Primordial? lol
I hope after the dark, there will be better days ahead. For now, Art isadistraction to keep my mind healthy and inspiration alive. #flowerfield #primavera #primordial #pulppainting #springvibes
Real Educated Minds do not constantly need to announce they are educated for validation. Education is never finished. Even the greatest, smartest, the most brilliant scholars in the world are still learning about the mystery of everything that surrounds us and everyday, there’s always something new to learn and something new to experience.If you become arrogant because you think you are educated, you are nothing but justamere idiot inasmall pond. Education makes us humble. Education is also something we learn from our experiences. It’saunique and fulfilling journey. For me, Art is not just art on canvas. The way we live is also considered as Art. Right now, my native country hasalot of bloodshed for dictatorship, rivalries for money and power towards authority. I never understand those kinds of power hungry Lust, Greed and Agendas. I am originallyavery content person when I have food to eat, place to live, education to learn and teach, Art to create and something to feel and contemplate. During this crisis, it just confirms the meaning of my existence. I just want to make Art and liveasimple life of mine that I already have withanever need to fit myself in the norms of society when I can appreciateasimple life true to myself. That has always been my way of life and that will still continue.
In the mood to create Yin Yang handmade papers. Asaside note, from both the Yin and Yang side of my mind, I REJECT “Shallow Materialistic”, Disgusting, Pathetic, Filthy and Idiosyncratic Attitudes, Mindsets, Actions, Behaviors and Lifestyles of Military Juntas, their Slaves and their associations. Never Ever had any impression even for once. Boycott them forever. ❌
#ခရိုနီ မိသားစုများ အလိုမရှိ
#မိုက်ရိုင်းစော်ကား ခရိုနီစရိုက် အလိုမရှိ
#စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားများ လုံးဝ အလိုမရှ
2 people confirmed Dead ( one is just 16 years old) in the protest and many are in critical condition and seriously injured. Myanmar police and military shot the Ambulance and Red Cross volunteers trying to rescue injured people. This is against the Geneva Convention. You can't do that even in war! They are doing Crimes against humanity!!! United Nations PLEASE HELP! MYANMAR NEEDS YOUR HELP.
This is not internal affair. This is not civil war. This is crime against unarmed civilians. United Nations Human Rights
I Truly Think and Request It's Time United Nations Take Serious Action Towards Myanmar Military Government, not just sanctions. They Keep Shooting Harmless people who Do not Have Weapons and peacefully protesting in every possible ways. United Nations army should really enter and CRUSH this Military Regime Down to Hell.
“စိတျဆိုးအောငျလုပျတာက ရတယျ။ဒါပမေဲ့ သူမြားစိတျနာသှားအောငျတော့ မလုပျနဲ့” တဲ့
သူတို့သားသမီးဆှနေီးမြိုးနီးတှေ အကုနျလုံးက လူတွေဆီက မတရား ရယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့အကောငျဖွဈတဲ့ကောငျကဖွဈ၊ စီးပှါးရေးလုပျငနျးကွီးတှေ လုပျတဲ့ကောငျကလုပျပွီး ပါတီတကျလိုကျ ရကေူးလိုကျလုပျနကွေတာကို မခံပွငျးဘူးလား။ သူတို့ကို သနားနရေအောငျ သူတို့ဘကျကရော ငါတို့အတှကျဆိုပွီး စာနာမှုပေးခဲ့ဖူးလို့လား။ ငါတို့ဆီက ရသမြှခွဈကုတျပွီး ဂုတျသှေးစုပျခဲ့တာပဲမလား။ ငါတို့ ခွင့်လွှတ်လွယ်ခဲ့လို့ စောက်မှတ်မရှိခဲ့လို့ ခုလို အခွင့်ကောင်းတွေယူကြပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ အနိုင်ကျင့်နေကြတာ။
ဒါပမေယျ့ ဘယျသူဖွဈဖွဈ ကလေးအစ ခှေးအဆုံး social punishment လုပျရမှာကတော့ လုပျရမှာပဲ။သူတို့ အဖကေ ဒီလိုကွီးပါလား၊ သူတို့ယောကျြားက ဒီလိုပါလား။ သူတို့မိဘတှကွေောငျ့ သူတို့ဟာ လူရာမဝငျတော့ပါလားဆိုတဲ့ စိတျမြိုး သူတို့ဆီမှာ ဖွဈလာစတေဲ့အထိ အဖိနှိပျခံ လူထုတဈရပျလုံး ဝိုငျးကဉျြထားဖို့လိုတယျ။ ဒါမှ နောကျမြိုးဆကျကို သူတို့စောကျကငျြ့တှေ လကျဆငျ့မကမျးနိုငျမှာ။ ဂဠုနျဦးစောရဲ့သားသမီးတှဟော ဘာအပွဈမှမရှိလညျး ခုခြိနျထိ လူရာမဝငျတော့ဘူး။
လကျရှိ CDM လုပျတာ၊ ဆန်ဒပွတာတှေ၊ နိုငျငံတကာဖိအားတှကွေောငျ့ အာဏာရှငျတှပွေုတျကသြှားရငျတောငျ ဒီပှဲဟာ ပွီးတယျမချေါသေးဘူး။
Boycott လုပျမယျဆို မသမေခငျြး လုပျလိုကျ။ social punishment လုပျမယျဆို တဈသကျလုံး မချေါမပွောနဲ့တော့။ ဒါဟာ သူတို့နဲ့ သူတို့မြိုးဆကျတှအေတှကျ ပွဈဒဏျပဲ။ ဒါဟာ မသမေခငျြးတိုကျသှားရမယျ့ တိုကျပှဲပဲ။
I Truly Appreciate the Decisions of All International Communities and Authorities ( US, UK, Canada, Australia and more and more) coming together and joining in the fight for Democracy to REJECT AND TERMINATE MYANMAR MILITARY JUNTAS and THEIR ASSOCIATIONS for the peoples's sake. စစ်အစိုးရနဲ့ သူ့ကျေးကျွန်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံဘူး။ အဲလို လူတစ်စုကြောင့် သာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက် မွဲတေနေရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ပိုက်ဆံနဲ့ လိုက်ဖုံးလို့ မရတော့ တဲ့ ဝဋ်ကြွေးတွေပေါ့ကွယ်။ လူတွေအပေါ်သူတို့မိုက်ရိုင်းထားသမျှ အနိုင်ကျင့်ထားသမျှ ကောက်ကျစ် ယုတ်မာထားသမျှ နလန်မထူနိုင်အောင် တိုက်ထုတ်ပစ်ရမှာ။ လူထု ဆန္ဒဆိုတာ အဲဒါဘဲ။မှတ်ထား။
Loving the textures of the snow grams. It really works well with cyanotypes. I will also made research with more photographic mediums.
ဪဒေါသတွေထွက်ပြီး ပြောရမှာမေ့နေလို့ မင်းအောင်လှိုင်ပုံကို အင်တာနက်က ယူပြီး Collage လုပ်ထားတာဆိုတော့ original photographer တွေ သဘောမတူရင်ဆ က်သွယ်စေချင်ပါတယ်။ collage ကများသောအားဖြင့်တော့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာ မလိုပါဘူး။ Richard Prince တို့ဘာတို့ဆို သူ့အကျိုးစည်းပွါးအတွက်ရောင်းတာပေါ့။ ကိုယ်ကတော့စေစ်အစိုးရကို တ်ာလှန်ရေးလုပ်တာပါ။ အကျိုးအမြတ်လဲ တစ်ပြားမှမရှိပါဘူး။ရောင်းရရင် ရောင်းရငွေကို CDM တစ်ပြား မကျန်ထည့်ခိုင်းမှာပါ။ Photographer ချင်း Respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါ။ ယူသုံးလို့ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ ကာတွန်းပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။
ဘာလို့ ငါ Dictatorship စနစ်ကို တော်လှန်လဲသိလား
လူတစ်စုဘဲ အမြဲနေရာရနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မုန်းတီးတယ်။အဲဒီလို ခရိုနီတွေကိုဘဲ ဘာအကျိုးအမြတ်လေးများရမလဲ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံရှိတိုင်း ခယမြှောက်စားနေတဲ့ လူ့ငနွားတွေကိုလဲ ရွံရှာတယ်။
အဲဒီ ခရိုနီတွေ စောက်ပါးစပ်ကအမြဲထွက်လေ့ရှိတဲ့ ငါတို့ အကြိုက်မလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ထမင်းအိုးမှောက်သွားမယ် ထမင်းငတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အပြောတွေကို အော်ဂလီဆန်တယ်။ ငါလည်း တတ်နိုင်သလောက်ဘဝမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်း အဲလို အားနေ ကိုယ့်ကိုစော်ကား အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ချင်နေတဲ့ ကျက်သရေ မရှိတဲ့ စောက်ချိုးတွေနဲ့ စောက်ခွက်ကို တစ်စိမှ ကြည့်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ဘဝတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်။ ငါပြတ်ပြတ်သားသားပြောမယ်။ ခရိုနီတွေ စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားတွေ ငါသေမဲ့နေ့အထိ ဆန့်ကျင်တယ်။ အဲလို လူစားတွေကို ငါတို့က တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း အသင်းအဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း အောက်တန်းစား လူယုတ်မာတွေလို့ဘဲ မြင်တယ်။ ဘယ်တော့မှ မကျေဘူး။ ရွံချက်ဘဲ ။
#စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားများ လုံးဝ အလိုမရှိ
Some research with photographic medium I have been doing lately. It’s Winter now and we are having snow storms like every week. So, I coated my cyanotype papers and put them to make photograms when it snows. I also work with photographic paper but the result was quite vulgar. Cyanotypes work pretty awesome. These are actual snow patterns. I will coat some more again to distract myself from 24/7 watching the retarded news of idiosyncratic Myanmar military dictatorship that’s giving me headache and trying to make me unable to focus on anything. So, gotta put my extremely distracted mind on making Art again. If anyone needs help, I am always ready to help but I won’t be online too much because I need to calm my mind downabit.
I FOREVER ❌ MYANMAR MILITARY DICTATORSHIP, THEIR SLAVES AND THEIR BUSINESS ASSOCIATIONS. NO NEED TO SAY MORE.🖕🏻 အာဏာရှင်နောက်လိုက်တဲ့ စစ်တပ်ကော ရဲကော ခရိုနီ မိသားစုတွေကော အယုံအကြည် လုံးဝမရှိဘူးဟေ့ ရွံမုန်းလွန်းလို့ သူတို့ရဲ့ Manipulative စရိုက်နောက်ကွယ်က သူတို့စားထားသမျှ လူတွေအပေါ်မိုက်ရိုင်းထားသမျှ အမြင်ကြည်ပါစေဆိုပြီး ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဟိုဖုံးဒီဖုံး လုပ်ပြနေတာတွေလည်း လုံးဝလက်မခံဘူး။ နင်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကို သိလွန်းလို့ ရွံရှာစက်ဆုတ်ပြီးသား။ ကျက်သရေမရှိတဲ့ဟာတွေ မြန်မြန် ကျဆုံး ရှုံးနိမ့်ကြပါစေ။
ဪ လူငယ်တစ်ယောက် သူ့ဘာသာမကျေနပ်လို့ စစ်အစိုးရဆဲတာကို မင်းကဘာကောင်မို့လို့ လေကြီးလေကျယ်ပြောနေလဲ ဆိုပြီး ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲက ခံစားချက်ကို ပြောတာဘဲ ရာထူး စည်းစိမ်တွေ ငွေကြေးချမ်းသာတွေရှိမှ ပြောရမှာလား။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူ့အကောင့်မှာ ပြောတာဘဲ။ ပြောပါစေပေါ့။လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာက လူသားတိုင်းမှာရှိသင့်တာလေ။ ဘာကောင်ဖြစ်မှ ညာကောင်ဖြစ်မှ ရှိသင့်တာမှ မဟုတ်တာ။ သူ့လာဆဲတဲ့လူ profile ကြည့်တော့လည်း ဘာကောင်မှလဲ မဟုတ်ဘူး။ အဲလို သူများကို သွားအပြစ်တင်လိုက်ရမှ နှိမ်ပြောလိုက်ရမှ ကိုယ်ကသိပ်ဟုတ်သွားသလို သိပ်တော်သွားသလို ထင်တဲ့လူတွေ လောကကြီးမှာ တယ်များပါကလား စိတ်ပျက်မိတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ အငုံစိတ်ဆိုတာ အဲဒါဘဲ။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ အဟုတ်ကြီးထင်တယ်။ အဲလိုလူတွေ အသက်ကကြီးပြီ ။သူများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိုကျ မလေးစားဘူး။ အဲလို အတွေးအခေါ်တွေ စစ်အစိုးရနဲ့အတူ ကျဆုံးပါစေ။
Been so distracted for the past 10 days and extremely hard to focus on other issues rather than the military Coup but here are some awesome ethereal works of my student Amna’s from my exploring darkroom techniques class at Flower City Arts Center. These are chemigrams and watergrams and some mixed combination techniques. So Proud of her works.
လမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေကို ဝန်းရံပေးကြပါ။ သူတို့ ချမ်းသာလို့ ပူစရာပင်စရာမလိုလို့ စောက်ပေါစောက်ရူးလို ဂိမ်းကစားသလို အပျော်ဆော့နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် အသက်အန္ဒရာယ် နဲ့ရင်းပြီး နိုင်ငံ့အနာဂတ် အတွက် လှုပ်ရှားနေကြတာပါ။ လူငယ်တွေ အရမ်းပင်ပန်းနေပါပြီ။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် နီးစပ်ရာ အိမ်တွေက ဝိုင်းကာကွယ်ပေးကြပါ။
Young People are Protesting. Not Playing Games on the Street like the Cheap Sh*t spoiled brat rich kids from Military Boot Licker Crony Families of Military Juntas. Please protect them as much as you can if the time comes. We don't know when the military is going to give troubles. So, Be Alert and Be Aware.
BTW, BOYCOTT THESE MILITARY RELATED BUSINESSES FOREVER.❌
ဒီပွဲဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
နိုင်ရင် သူတို့ကို အနာဂတ်မှာ လုံးဝ ကြောက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
မနိုင်ရင် နိုင်ငံမှာ မြောက်ကိုရီးယားလို စောက်သုံးမကျတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လမ်းပေါ်ထွက်မဲ့လူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်လို့ရမဲ့ ပစ္စည်း တွေနဲ့ သတိကြီးစွာထားပြီး ဆန္ဒပြကြပါ။
စိတ်ထဲမှာ အောင်မြင်မယ်လို့ဘဲ တွေးပါ။
ဝယ်ချင်တဲ့လူရှိရင်ပြောနော် စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ စောက်စစ်အစိုးရကို စောက်မြင်ကပ်တိုင်း ထပ်ထည့်ပေးမယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ပုံကို အင်တာနက်က ယူပြီး Collage လုပ်ထားတာဆိုတော့ original photographer တွေ သဘောမတူရင်ဆ က်သွယ်စေချင်ပါတယ်။ collage ကများသောအားဖြင့်တော့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာ မလိုပါဘူး။ Richard Prince တို့ဘာတို့ဆို သူ့အကျိုးစည်းပွါးအတွက်ရောင်းတာပေါ့။ ကိုယ်ကတော့စေစ်အစိုးရကို တ်ာလှန်ရေးလုပ်ရာပါ။ အကျိုးအမြတ်လဲ တစ်ပြားမှမရှိပါဘူး။ရောင်းရရင် ရောင်းရငွေကို CDM တစ်ပြား မကျန်ထည့်ခိုင်းမှာပါ။ Photographer ချင်း Respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါ။ ယူသုံးလို့ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ ကာတွန်းပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။
One Image : 15800 Kyats in Myanmar. I will arrange your money go 100% directly to the Civil Disobedience Movement Funds. ဒီပုံတွေ ရောင်းပါတယ်။ ၁၅၈၀၀ ပါ။ ကျသင့်ငွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Civil Disobedience Movement ကို တိုက်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်
I AM NOT FEELING CONSTIPATED. MIN AUNG HLAING'S SLAVES = FULL OF SH*T.
THEIR SLOGAN : "BEEN TOLD TO BEAT PEOPLE SO WE DID THAT COZ WE AIN'T GOT BRAIN TO THINK".
သူတို့၏ ဆောင်ပုဒ် : တာဝန်အရလူရိုက်ရတာပါ။ သူများပြောတိုင်း လုပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ဦးနှောက်က ကျွန်တော်တို့မှာ မရှိဘူး။
One Image : 15800 Kyats in Myanmar. I will arrange your money go 100% directly to the Civil Disobedience Movement Funds. ဒီပုံတွေ ရောင်းပါတယ်။ ၁၅၈၀၀ ပါ။ ကျသင့်ငွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Civil Disobedience Movement ကို တိုက်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
စောက်ရေးထဲမှာ လူတွေဒီလောက် အာရုံနောက်နေတာကို ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဆိုပြီး ပြောင်သလို နောက်သလို လုပ်နေတဲ့ စောက်ခွေးမျိုးသားသမီးတွေကတော့ သူတို့သတ်လို့ လူတွေသေရင်တောင် အဲသရဲတွေက ပြန်လာပြီး ဂုတ်ချိုးသတ်မယ်မှတ်. နင်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေအပေါ် ယုတ်မာတဲ့ မတရားမှုတွေက နင်တို့နောက်ကို လိုက်နေတာ. မကောင်းမှုဆိုတာ မပြောင်နဲ့ ပြေးမလွတ်ဘူး
The Below Video is Said Min Aung Hlaing’s Son. Watch how much money Crony families had Vs how much people are Suffering right now. NEVER TRUST THEM. ငါကတော့ ခရိုနီ မိသားစုတွေနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေကို ခယနေတဲ့လူတွေဆို အဲလိုဘဲထင်တယ်။ သူတို့ သုံးစွဲ့နေကြစကားရှိတယ်မလား မင်းတို့ငါတို့အကြိုက်မလိုက်ရင် ထမင်းငတ်သွားမယ်ဆိုတာလေ စောက်ရိုင်းတွေ
Please Please ...The Situation has become The Foreign Troop must come in to Myanmar and SLAY MIN AUNG HLAING like Osama Bin Ladin. We All are Waiting for it.
JUSTICE For MIN AUNG HLAING
YOUR HEAD IS WORTHY OF SH*T
စစ်အစိုးရနဲ့ သူ့ကျွန်တွေလိုချင်တာ ကြောက်စိတ်ပါ။
သူတို့ လိုချင်တာ မပေးပါနဲ့။ မကြောက်ပါနဲ့။ အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မွေးပြီး အားတင်းထားပါ။ ဒီဘက်ကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးပါမယ်။
( သာမာန်ပြည်သူတွေပြောတာနော် စစ်တပ်နဲ့ သူတို့ကို အားပေးတဲ့ သူတို့ကျွန်တွေမပါဘူး )
FOR SALE: Portraits of MIN AUNG HLAING: THE MOST SHAMELESS BITCH OF MYANMAR ကိုယ်တွေ အဖြုတ်ချင်ဆုံးခေါင်းကတော့ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ သူ့ကျွန်တွေရဲ့ခေါင်းဘဲ One Image : 15800 Kyats in Myanmar. I will arrange your money go 100% directly to the Civil Disobedience Movement Funds. ဒီပုံတွေ ရောင်းပါတယ်။ ၁၅၈၀၀ ပါ။ ကျသင့်ငွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Civil Disobedience Movement ကို တိုက်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
All Your money Go 100% to Civil Disobedience Movement Myanmar
Need some Food for your Dog? We got Burma's Most SHAMELESS BITCH for you. Only 15800 Kyats in Myanmar. All Your Money Go Directly 100% to Civil Disobedience Movement.
HELP SAVE THE COUNTRY TODAY! # DogFoodOfTheYear
www.htettsan.com , https://serenity-space.tumblr.com
Be the first to know and let us send you an email when Htet T San Photography posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to Htet T San Photography:
That chemical reaction though. #paintingwithchemicals #alternativedarkroomprocesses #enoughfortoday
Feeling like float in Cosmo or flow with Zen while painting with photo emulsion ... my background music helps keeping the mood lol #currentobsession
My volcano being developed . Sometimes, this process takes the entire evening just for one print but each print looks entirely different and unique from the same negative. #lovingthiseffect 🤓
Look at this very calming and meditative process with veils. These are some images I took from my night exploration in the forest from Costa Rica trip with Meli. #lovetheprocess #thoseveils😍 #darkroomfun
Will be makingalyrics book for my little bro’s songs. #brothersistercollaboration #siblings #love
Room of Memories Installation room
I set upamovement activated timelapse camera in my installation room to record timelapse everyday as part of my concept for "Room of memories". This is how it looks like on view from my computer. Thanks for those who came by and visited my installation. ခွေးတွေ နွားတွေ ကြောင်တွေ တော့မရှိဘူး လူတွေတော့ လာကြည့်တယ် တော်တော်များများဘဲ နောက်မှဘဲ video တင်တော့မယ်
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကိုကြည့်ရတာ ကျက်သရေရှိလို့ အနုပညာတောင် အဲဒီဘက်ပဲ ဦးတည်လုပ်တယ် Isn’t that beautiful? Adding some light and breeze for my wild horses. #wildhorses #livevisualeffects
I have never seen little seagulls before. could watch them all day long. ကမ်းခြေမှာ မနက်ဖက်လမ်းထွက်လျှောက်တာ အေးချမ်းလို့ #morningwalk #beach
#liveprojection #projectionart #audiovisual
Projection art in creepiest form. Lol actually can’t believe it looks like this. We were just trying new techniques. #audiovisual #interactive #projectionarts
I took particular interest in Duane’s works in school because I feel like we have common interest such as exploring interior mental landscape rather than taking pictures of just external morphology /surface of things, people, streets and such that I don’t really know much about in my personal works. Discovering his works in my earlier days of photography makes me feel like I am establishingaconnection with someone’s mind in the field I love. He said I can also ask him personal question . So, I ask him to write on one of my fav photographs of his about “human experience “ and he wrote this for me. Today could be considered as one of my most favorite days in my life.
This is one of the silkscreen projects I worked onawhile ago. I have made some limited edition artist books out of digital copies from my original gold prints. They are available through my website www.htettsan.com. Some of these are currently installed in my exhibition at School of Visual Arts which is still ongoing entire September. Thank you all.
#solarart #solarpanel #creativetech #arttechnology #modernart
Close up of chemigram+ Mirror installation from Dreams and Memories exhibition. Each aeroplane holdsapoem inside that I have written over the years. #chemigrams #mirror #installation #void
#hologram . An awesome art technique painted with rays of light. #process #making #lab
Recently, I learned how to use electricity to put light and sound inside my artworks. This is one of the pieces I created via using this technique. The concept is inspired by the dark energy/dark matter of the universe and flag of the planet earth with my own imagination of wanting to create something beautiful. So, I painted my work black on black paper and the flower on the mirror. When you touch the flower and the heart at the same time, it produces music. Title- Heart Song Materials- Mirror + Electric Paint + Light + Music
I always wanted to see this in person. I was in Manhattan early in morning for the first time since I was going out of town this weekend. And, this dream came true. It took my breath away and I would like to share it with you guys :)
Snow Storm Night in Huntsville
It's snowing heavily outside..they call it snow storm....I was planning to makeaphoto but it's not obvious enough..so I took out my small camera to shoot video ..check this my crappy video piece ....I just would like to share this winter snow storm night with all of you, my friends ...haveanice day!